Paartiin Badhaadhinaa ‘diraamaa nurratti hojjete’ jedhan dhalattoonni Tigiraay – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsPaartiin Badhaadhinaa ‘diraamaa nurratti hojjete’ jedhan dhalattoonni Tigiraay
Dhalattoonni naannoo Tigiraay dhiyeenya Paarkii Tokkummaa masaraa mootummaa biyyaalessaa keessatti ijaarame daawwatan, ‘diraamaatu nurratti hojjetame’ jedhan.
A.L.I Guraandhala 21 bara 2012 miidiyaaleen mootummaa gabaasa miseensonni Paartii Badhaadhinaa damee Tigiraay paarkii Tokkummaa daawwatan gabaasa jedhu hojjetanii ture.
Namootni daawwannaa kanarra turan BBC’f yaada kennan, ‘osoo nuti miseensa Paartii Badhaadhinaa hin ta’iin akka waan miseensa taaneetti nu dhiyeessani’ jechuun komataniiru.
Namni hojjetaa INSA ta’e maqaan isaa akka hin eeramne gaafate tokko, inniifi waahillan isaa kudhanii ol Paarkii Tokkummaa kan daawwatan hambaa biyya Neezarlaandis irraa dhufe kan bataskaana Calaqoot naannoo Tigiraayiif deebi’e simachuuf waamamanii akka ta’e dubbatu.
Hanga sirni walharkaa fuudhinsaa sun raawwatutti maaliif Paarkii Tokkummaa hin daawwattan yaada jedhuun paarkicha daawwachuu isaaniis hima.
Booda garuu gabaasa miidiyaaleen mootummaa dhiyeessan irratti miseensonni Paartii Badhaadhinaa damee Tigiraay Paarkii Tokkummaa daawwatan jedhamee suuraa keenya TV irratti argine jedha namni kun.
‘Diraamaatu nurratti hojjetame’ kan jedhu namni kun jalqabumaa hojjetaan INSA tokko miseensa dhaaba siyaasaa ta’uu akka hin dandeenye dubbata.
Namoota guyyaa sana paarkicha daawwatan komii wal fakkaataa qaban keessaa tokko aanga’aa duraanii Eejansii Nageenya Odeeffannoo (INSA) dhiyeenya hidhaa irraa hiikama Koloneel Biniyaam Tawaldeeti.
Dhimma kana ilaalchisuun BBC’n yaada kennaniin, ”ani mana hidhaatii bahee guyyoota muraasa booda sirreeffamtoota achitti hafan gaafachuuf mana hidhaa Qaallittiifi Qilinxoo deemeen ture,” jedhu.
San booda yaaddoo sirreeffamtoonni kunneen qaban erga dhaggeeffatanii booda waahila isaanii duriifi MM Itoophiyaa ammaa Dr Abiy Ahimad waliin wal arganii haasa;uuf fedhii horachuu dubbatu.
Koloneel Biniyaam MM Abiy waliin A.L.I bara 1998 hanga 2002 akka waliin hojjetan dubbatu.
MM Abiy kan waggoota 14’f waliin hojjetan waliin wal arguuf karaa Ministira Innooveeshiniifi Tekinooloojii Dr Abrahaam Balaay beellama qabsiisuu isaaniis himu.
Boodas MM mataansanii isaan waliin wal arguuf fedhii akka qaban waan mirkanneeffataniif, waajira MM dhaquu isaanii dubbatu.
Osuma waajjira Ministira Muummee jiranuu, namoonni hambaa Bataskaana Calaqootiif deebi’u fudhachuu Tigiraay irraa dhufan waan jiraniif isaan waliin maaliif Paarkii Tokkummaa hin daawwattu affeerraan jedhu dhiyaateefi paarkicha daawwachusaanii himu.
‘Miseensa badhaadhinaa ta’uu hin danda’u’
Daawwannaa san booda MM Abiy waliin wal arguudhaan haala hidhamtoonni itti jiran, hiriyyummaa fi jireenya yeroo hojii waggoota 14’f waliin dabarsan ilaalchisee waliin dubbachuu isaanii himu.
Koloneel Biniyaam, gabaasa miidiyaarratti miseensooti Paartii Badhaadhiinaa damee Tigiraay Paarkii Tokkummaa daawwatan jedhamuun dhiyaaterratti akka of arganiifi wantichi dogoggora ta’uu dubbatu.
”Ani dura loltuun ture. Booda ammoo hojjataa INSA, san booda ammoo mana hidhaa galee dhiheenyan gadhiifame, yaadaafi hubannoo sammuu kiyya keessa jiruun damee barnootaafi teeknooloojii irratti hojjachuun fedha” jedhu.
Amma yeroo gababaa keessatti miseensa paartii siyaasaa kamiiyyu ta’uu hin barbaadu kan jedhan Koloneel Biniyaam, “keessumaa ammoo miseensa Paartii Badhaadhinaa miti. Ta’uullee hin danda’u,” jechuun ifa godhaniiru.
”Anaaf paartiin badhaadhiinaa miidhaafi dhiibbaan ummatan keessatti guddadheerraan gahee olaanaatu jira. Dhunfaaniis miidhaan narra gahee waan jiruuf, paartii akkasii waliin hojjachuuf yaduu hin danda’u,” jedhaniiru.
Taatee tibbanaatiif KFO fi OMN deebii maal qabau?
Itoophiyaan haala itti guddatu irratti nama falaasama mataa kiyyaa qabuudha kan jedhan koloneel Biiniyaam, oduun miseensoota paartii jedhamuun dhiyaate dogongora jedhaniiru.
Gabaasa miidiyaaleen biyya keessaa dhiyeessan jedhame kanarratti namoonni miseensota Paartii Badhaadhinaa damee Tigiraay ta’uu himatanii yaada kennan ni jiru.
Komii kanneen osoo miseensa hin ta’iin miseensa jedhamnee dhiyaanne jedhan irratti deebii akka nuuf kennan ministira Innooveeshiniifi Tekinooloojii akkasumas qindeessaa Paartii Badhaadhinaa damee Tigiraay kan Dr. Abrahaam Balaay argachuuf yaallee turre.
Dr. Abrahaam gaaffii keenya erga dhaga’anii booda akka irra deebinee bilbilluuf nutti himanii, yeroo itti deebinee bilbillutti isaan argachuu hin dandeenye.